Xuanhua drilling rig yakaita imwe budiriro yakanakisa - mayunitsi makumi mashanu eSWMC 360 ekuchera RIGS akashandisa matani anodarika chiuru nemazana masere ezvinoputika mukati memwedzi usingasviki mumwe, kanopfuura kaviri kudyiwa kwezuva nezuva. Tianchen Qixiang Nylon New Material Project, chirongwa chakakosha cheShandong Province ine yakazara...
Fengshan Mine, iri muChangping District, Beijing, ndiyo yakavakirwa marambi ezvigadzirwa zveBeijing Cement Works Co., Ltd., yakaverengerwa se "National Green Mine Pilot Unit" neBazi reNyika nezviwanikwa muna 2011 uye imwe. emabhizinesi ekutanga simende kupfuudza ...
na admin pa 20-11-05
SWMC 370 subsurface drilling rig yakabudirira kupedza hwaro grouting chirongwa chechirongwa chezvivakwa muGuangzhou, China. Iro real estate project muGuangzhou inovhara nzvimbo ye62,000 m2, iyo 44,000 m2 iri pamusoro pevhu uye 18,000 m2 iri pasi pevhu. Kune 25 pasi pamusoro pevhu ...
Nekuwedzera kuri kuita kushomeka kwesimba rechinyakare, kusimukira uye kushandiswa kwesimba idzva kwakakwezva kutarisa kwenyika dzese pasirese. Panguva imwecheteyo, China yeChina photovoltaic simba idzva iri kukura nekukurumidza, uye tekinoroji iri kukura zvishoma nezvishoma, kuswedera kana kuita. ..
Gunyana—Makwikwi ari kuuya, mwaka wekukohwa une michero yakawanda uye kunhuhwirira kunopararira! Bulldoza iyo inobatirira kushanda nesimba kwevashandi veHBXG yeRussian Petroplem Project yakahwinwa neHBXG yave kubudirira kutumirwa kumusika weCIS zvakare! Uku ndiko kutenga kwechipiri nyoro kwe ...
SWMC YAKAPIWA SOLUTION PACKAGE YEBEIFANG QUARRY
na admin pa 20-08-28
SWMC, mugadziri weMichina yekuchera, nenzira imwechete yekupa zvakakwana zvigadzirwa zvemuchina kune vatengi, inoshandisa anopfuura makore makumi maviri echiitiko cheindasitiri kupa mhinduro dzakavimbika dzekuchera kune vashandisi vemichina yekuchera pasi uye kubatsira vatengi servi...
Yakakwira-sprocket bulldozer inosarudzwa!
na admin pa 20-08-26
Musi waKurume 12, 2020, batch yeSD7N yakakwira-sprocket bulldozer yakatumirwa kuchiteshi uye yakagadzirira kurodha kumusika weRussia & CIS wematunhu. Iyi batch bulldozers inotengwa nemutengi wemugodhi, kuita basa rekubvisa uye kuunganidza zvinhu zvekuvharira. Vanotenga...
Kurwisa Epidemics, Kuendesa Nenguva!
Kutarisana nekubuda kweiyo noval coronavirus denda, vashandi veSWMC vari kutora matanho anodiwa kuvimbisa "Zero denda rehutachiona", uye vachiedza zvakanyanya kuunza kutumira nenguva. Musi waKurume 5, 2020, batch yeTS160-3HW bulldozer yakatumirwa kuSoutheast...